Klopp Oo Gerard Faray Inuu Maskaxda Ku Hayeeyo 2 Arin Hadii Uu Doonayo Inuu Noqdo Macalin Guuleysta %
Tababaraha kooxda kubada cagta Liverpool, ninka lagu magacaabo Jurgen Klopp ayaa wuxuu kula taliyay Steven Gerrard, inay waajib ku tahay inuu maskaxda ku hayo ku mashquulida iyo xiisaynta sidii uu kooxdiisa guul ugu soo hoyn lahaa.
Gerrard, ayaa wuxuu hadda yahay tababaraha ciyaartoyda 18-sano jirada ee kooxda Liverpool, isagoona kaalinta saddexaad uga jira shaxda kala horeynta Premier League, gaara ahaan ciyaartoyda ay da’dooda udhaxayso 18-sano jiradda.
“Waxaan ku farax-sanahay in Steven uu kusoo biiro [shaqada macalinimo] maxaa yeelay wuxuu mar walba sameynayaa waxyaabo badan oo sare ukac ah,” ayuu Klopp ku sheegay wareysi siiyay Shabakadda Bet Victor.
“Waayihiisa ciyaartoyda, wuxuu ahaa ciyaaryahan wayn oo guuleysta – si gaar ah waqtiyadiisa Liverpool wuxuu ahaa mid cajiib ah, waxaana hada urajeynayaa inuu noqdo mid guuleysta,” ayuu hadalkiisa kusii daray, hogaamiyaha Reds.
“Taasi waa sababta aan uleeyahay inuu ubaahan yahay inuu mar walba diirada saaro sidii uu shaqadiisa ugu guuleysan lahaa, sababtoo ah shaqada tababarinimo ma ahan wax sahal ah, maxaa yeelay waxay mar walba ubaahan tahay fikir badan.
“Marka, aniga waxaan kula talin lahaa inuu xooga saaro sidii uu kooxda uu joogo uu guulo u gaarsiin lahaa uuna daacad u ahaado guusha,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, macalinka Liverpool, ninka lagu magacaabo Steven Gerrard.